IQOO: I-sub-brand entsha yeVivo | I-Androidsis
UEder Ferreño | | IsiTshayina Android, Izaziso
IVivo yenye yezona zinto zithengiswa kakhulu e China, Yeyesibini kuphela emva kweHuawei okwangoku. Uphawu ngoku lusishiya nenqaku elibalulekileyo leendaba. Kuba njengoko ezinye iinkampani zenzile ngaphambili, yongeza kwindlela yokwenza uphawu olwahlukileyo. Babhengeze ukuzalwa kwe-IQOO, uphawu lwabo olungaphantsi.
Yiyo loo nto siyibona IVivo ilandela ekhondweni lezinye iimveliso ezinje ngeXiaomi Ngubani odale iimveliso ezimbini kwiinyanga ezidlulileyo, Redmi kwaye zimbalwa. Kule meko, umenzi ubhengeza olu hlobo kuthi ngeli gama linomdla, IQOO, esineenkcukacha ezimbalwa ukuza kuthi ga ngoku.
Nangona inkampani ngokwayo ingakhange inike iinkcukacha ezininzi malunga noluphawu olutsha, Ifoto yokuqala esemthethweni ye-IQOO sele ibonakele. Ifoto ongayibona apha ngezantsi. Ndiyabulela kuyo, unokukwazi ukukhangela ulwalathiso inkampani yaseTshayina efuna ukuyithatha kunye nolu hlobo lutsha lwesibini.
Amagqabantshintshi abonisa ukuba IVivo yenze i-IQOO njengophawu lomdlalo. Olu luvo oludluliswayo kunye nalo mfanekiso wokuqala usemthethweni wentsingiselo entsha yaseTshayina. Isakhiwo embindini wesithombe siyabetha, sinoyilo olufana nolunye lwee-smartphones zemidlalo ezithandwa kakhulu kwi-Android.
Ukususela ijongeka njengeXiaomi Black Shark okanye i-ASUS ROG yefowuni. Ke ngoko, yonke into ibonisa ukuba olu hlobo lutsha lweVivo lungagxila kwicandelo lokudlala. Icandelo eliqhubeka nokukhula kwaye apho sibona khona ukuba uninzi lweemodeli zokumiliselwa kweemveliso. Nangona le ayisiyonto iqinisekisiweyo nge-100% ngalo mzuzu.
Siyathemba ukuba iVivo iza kubhengeza ulwazi olutsha malunga ne-IQOO kungekudala. Akukho nto yaziwayo malunga nexesha esinokulindela ngalo i-smartphone ngolu hlobo olutsha. Ke siya kuzimamela iindaba zenkampani. Ukwazi nokuba kuya kubakho ukumiliselwa kweemveliso zayo kwilizwe liphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » IsiTshayina Android » IVivo ibhengeza i-IQOO, uphawu lwayo olutsha
I-Google Play yongeza "Bambelela kwizinto onokukhetha kuzo" endaweni yamachaphaza amathathu amileyo